FAQ - XGEAR
Ny vidiny dia mety hiova arakaraka ny famatsiana sy ny anton-javatra hafa amin'ny tsena.Handefa lisitry ny vidiny farany izahay rehefa voaray ny hafatrao raha mila fanazavana fanampiny.
Eny, takianay ny baiko iraisam-pirenena rehetra mba hanana ny isan'ny kaomandy farany ambany.Raha mitady hamidy indray ianao nefa amin'ny fatra kely kokoa dia mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.
Eny, afaka manome ny ankamaroan'ny antontan-taratasy izahay ao anatin'izany ny Certificate of Analysis / Conformance, Insurance, Origin, ary antontan-taratasy fanondranana hafa raha ilaina.
Ho an'ny santionany, ny fotoana fitarihana dia eo amin'ny 7 andro.Ho an'ny famokarana faobe, ny fotoana fitarihana dia 30-45 andro aorian'ny nandraisany ny fandoavam-bola ary manana ny fankatoavanao farany amin'ny vokatrao izahay.Raha tsy mifanaraka amin'ny fe-potoanao ny fotoana fitarihana anay, azafady mba diniho ny zavatra takinao amin'ny fivarotanao.Amin'ny toe-javatra rehetra dia hiezaka hanome izay ilainao izahay.Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia afaka manao izany isika.
Afaka mahazo ny vokatra aloha ve aho?
Eny, manana trano fanatobiana entana roa izahay any Etazonia, raha any Amerika ianao, dia samy misy ny fanafarana mivantana sy ny sambo an-trano.
Manaiky karazana fandoavam-bola maro toy ny L / C, D / A, D / P, T / T: 30% petra-bola mialoha, 70% fifandanjana manohitra ny dika mitovy ny B / L.
Izahay dia manome antoka ny fitaovana sy ny asa, ny fanoloran-tena dia ny fahafaham-po anao amin'ny vokatray.Ny vokatra isan-karazany dia hanana fotoana hafa ho an'ny fiantohana, miankina amin'ny fomba fiasan'ny vokatra izany.